Cashar barasho: Sidee loo ogaadaa in qof kugu hellayo 'Raadi Saaxiibbaday' | Wararka IPhone
Apple waxay dooneysaa inay siiso isticmaale koontarool badan oo ku saabsan asturnaantooda, qayb la horumarinayo gaar ahaan macruufka 7. faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qalabka dhul-bixinta. IOS ayaa hada noo sheegaysa barnaamijyada isticmaalay meesha ay yaaliin iPhone, iPod Touch iyo Ipad iyo waqtiga.
Mid ka mid ah su'aalaha inta badan ay isweydiiyaan adeegsadayaasha adeegsada barnaamijka Apple-ka ee ah “Find My Friends”, si aad uga heshid xiriiradayada khariidada, waa haddii ay jirto hab lagu ogaado marka qof isku dayo inuu ku helo. Jawaabta tooska ah ayaa ah inaysan jirin wado lagu ogaan karo in qof khaas ah uu goor dhow kaa helay khariidada, laakiin haddii aad leedahay saaxiibo kooban oo kugula socda "Raadi Saaxiibbaday", way fududahay in la ogaado.
Tani waa xeeladaha loo adeegsado. Marka hore, waan arki doonnaa haddii aan korka shaashadda taleefanka ku hayno firfircooni, xilligaas, fallaarta goobta. Hadday sidaas tahay, taasi macnaheedu waa codsi ayaa isku dayaya inuu ogaado mawqifkeena juqraafi ahaan wakhtigaas. Si aan u aragno waxa barnaamijyadu adeegsanayaan goobtayada, waxaan aadnaa dariiqa soo socda:
Dejinta- Asturnaanta- Goobta.
Haddii aynaan furin arjiga «Raadi Saaxiibbaday» dhowaan, laakiin waxaan aragnaa inuu jiro mid Falaar ku xigta «Saaxiibbada», markaa waa sababta oo ah xiriirka qaar ayaa isku dayay inuu na soo helo. Sidii aan soo sheegnay, haddii aad liis gaagaaban oo asxaab ah, ma adkaan doonto in la ogaado cidda ay ahayd.
ka f arrow Waxay leeyihiin midab kaladuwan iyadoo ku xiran isticmaalka goobta:
Fallaar ka buuxsan guduud: Codsiga ayaa dhowaan adeegsaday goobtaada.
Falaadh cirro: codsigu wuxuu isticmaalay goobtaada 24-kii saac ee la soo dhaafay.
Falaar oo leh tilmaam guduud ah: Barnaamijyada isticmaalaya meerisyo meeris ah oo ku xeeran goobtaada.
Macluumaad dheeraad ah- Nolosha shisheeyaha iga xaday iPhone-kayga, guul cusub oo Tumblr ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Cashar barasho: Sidee loo ogaadaa in qof kugu hellayo 'Raadi Saaxiibbaday'
Laakiin tani kuma cusba IOS7, IOS6 waa sidaas oo kale.
Kordhinta cajiibka ah ee fudud, barnaamijka Apple ee usbuuca